Hery Rajaonarimampianina : « Fototry ny fampandrosoana ny sehatry ny fitrandrahana » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Fototry ny fampandrosoana ny sehatry ny fitrandrahana »
Nosokafana omaly tamin’ny fomba ôfisialy ny “Salon des mines, de pétrole et de l’équipement” andiany faharoa. Hetsika tanterahina eny amin’ny Mining Business Center eny Ivato, ny 13-15 avrily izao. Araka izany, tonga nanokatra izany ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, sy ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Solitany, Ying Vah Zafilahy, notronin’ireo olo-manan-kaja ambony maro.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ny lahateny nataony fa fototry ny fampandrosoana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. “Fototry ny fampandrosoana, ary tafiditra indrindra amin’ireo teboka fito amin’ny vinan’ny Fisandratana. Teboka roa anatin’izany no misy ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny solitany”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany ihany koa fa tokony hiray saina sy hifanome tanana amin’ny fampiroboroboana io sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany io ireo sehatra tsy miankina. “Tokony hifanome tanana ianareo eo amin’ny sehatra tsy miankina hoentina mampiroborobo ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany eto amintsika. Tadidio fa manan-karena eo amin’io sehatra io ny firenentsika”, hoy hatrany ny Filoha.
Ankoatra izay, nilaza izy fa efa misy fanantenana lehibe ny fandrosoana eto amin’ny firenena. Voalaza mantsy fa efa manomboka miakatra ny toekarem-pirenena amin’izao fotoana izao. “Ny harena ambanin’ny tanin’i Madagasikara dia manintona olona betsaka, indrindra fa ny harena an-kibon’ny tany sy ny solitany. Izay indrindra no hanaovako antso avo ho an’ireo mpampiasa vola mba hampiasa ny volany eto amintsika eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana”, hoy izy.
Etsy andaniny, nanambara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa tafiditra ao anatin’io sehatra io ny famoronan’asa maro, ny fisian’ny fotodrafitrasa, sns. Voalaza fa mitondra ary mamorona tombony fanampiny amin’ny fampidiram-bola ho an’ny firenena ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Noho izany indrindra, hoy izy, mila ny fifanomezan-tanana sy finiavan’ny tsirairay izany.
Notsindrian’ny Filoham-pirenena ihany koa tamin’ny lahateny nataony fa mila hapetraka ny famadihana sy fikarakarana ireo harena an-kibon’ny tany vao tokony haondrana fa tsy haondrana amin’ilay mbola tsy voakarakara. “Anisan’ny mampitombo ny harin-karena faoben’ny firenena ny fahaizana mamadika sy mikarakara ny harena an-kibon’ny tany mialoha ny hanondranana azy. Izany hoe, mila ilay Business Plan matotra tsara ny fahazoan-dalana mitrandraka”, hoy izy.
Na izany aza, nanambara ny Filoha fa nisy fepetra noraisin’ny Fitondram-panjakana amin’ny fanomezana ireny fahazoan-dalana hitrandraka ireny. “Efa marobe ny fahazoan-dalana mitrandraka. Efa tody hatrany amin’ny 4 000 na 5 000 tany ho any izy ireny. Saingy, tazonin’ny olona fotsiny fa tsy ampiasainy dia avy eo amidiny hangalan’izy ireo tombony. Lasa miteraka olana be izany satria tsy fantatra intsony izay nahazo azy sy ireo nividy, ary ireo izay mitrandraka amin’ilay izy. Hany ka lasa tsy tratra intsony ny tanjona amin’ny fampandrosoana eo amin’ilay faritra sy eo amin’ny firenena”, hoy ny Filoham-pirenena.
Mihazakazaka manokatra fanadihadiana hatrany ny Bianco raha vao misy fitoriana na fitarainana voarainy ka mahakasika ny fitondram-panjakana na ireo mpanao politika akaikin’ny mpitondra. Tsy vitan’ny manokatra fanadihadiana fa manao valandresaka an-gazety, ary mazàna efa tena ...Tohiny